हातका औँला त बराबर छैनन् भने परदेशिएको छोरा सम्झेर के मन दुखाउनु ?
Sun, May 27, 2018 | 15:24:17 NST
18:58 PM (1 year ago)
मलिता खातुन/लक्ष्मीपुर ६ सर्लाही ।
खौ के भनौं ? आजभोलि मलाई जीवन प्यारो लाग्न थालेको छ । रमाईलो लाग्न थालेको छ । म अलिक लोभी भएको छु जीवन भोगाइको क्रममा । तर चार महिना अघिको अवस्था सम्झिँदा अहिले पनि मेरो शरीर सिरिङ्ग हुन्छ ।
पैसा कमाउन गएको छोरा मलेसियामै रमाए पछि उसले अनौठो व्यवहार देखाउन थाल्यो । मलेसियाबाट चार पाँच महिनामा फोन गथ्र्यो । त्यो पनि फरक फरक नम्बरबाट । त्यै पनि मलाई होइन बुहारीलाई मात्रै गथ्र्यो । मेरो इच्छा चाहिँ छोराले मसँग पनि फोनमा कुराकानी गरिदियोस, विदेशमा बस्ने उसको हालखबर कस्तो छ भनेर सुनाइदियोस भन्ने थियो । तर सबै इच्छा कहाँ पूरा हुने रैछन र ?
त्यही चिन्ताले मलाई बिस्तारै डढेलोले बन खाए जसरी मन खाइरहेको थियो । मेरो दिमागले खाली छोराको व्यवहारका बारेमा मात्रै सोचिरहन्थ्यो । जसले गर्दा तनाब बढेको बढै थियो । तनाबले मानिसलाई दुखी र कमजोर बनाउँदो रहेछ । त्यतिबेला मेरो जीवन कस्तो हो भन्ने कुरा मनमा आईरहन्थ्यो । म आफनो केही ख्याल थिएन । नत समयमै खान्थे न समयमै सुत्थें नै । त्यतिबेला मलाई आफनो जीवन नरमाइलो र उजाड लाग्थ्यो ।
एक दिन म घरमा छोराले किन यस्तो व्यावहार गरेको होला भनेर सोचेर बसिरहेको थिएँ । त्यतिनै बेला घरमा को हुनु हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो । उहाँ विदेश सम्बन्धी सूचना दिँदै गाउँघरमा आउने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ । उहाँसँगको कुरापछि मैले पनि मेरा पीडा सुनाएँ । चार दिन पछि मेरो भेट उहाँले लिएर आएको अर्को सरसँग भयो । उहाँका कुरा सुन्दा मनमा आनन्द हुन्थ्यो । मनबाट काँडै निकालेर फलिदियको जस्तो हुन थाल्यो ।
सरले सोधेका अनौठो प्रश्नले सुरुमा त मलाई रिस पनि उठ्यो । प्रश्न त अनौठो खालका थिए । उहाँले छोराको व्यवहार सम्झेर मन दुखाउन थालेको कति समय भयो ? यतिको समय मन दुखाउनु भएछ छोराले कति पटक फोन गरेर कुरा गर्‍यो ? अझै कति दिन मन दुखाउनु भयो भने छोराले कुराकानी गर्छ ? यी सुन्दा हाँस उठ्ने प्रश्नले मनको मैले लिएको तनाव त अनावश्यक तनाव रहेछ भन्ने पो बनाइदियो ।
सरसँगको भेटघाट र कुराकानी पछि अहिले मेरो सोचाई फेरिएको । मैले छोराको व्यावहार सम्झेर मन दुखाउँदा मलाई नै घाटा भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ । मेरै आफनो शरीर, मन कसरी कमजोर भएको रहेछ भन्ने कुरा छुट्याएँ । मेरो आफनो हातका पाँच वटा औंला बराबर छैनन् भने म किन एउटा छोराले गरेको व्यवहार सम्झेर मन दुखाउनु ? उसले नसम्झिएर के भो त अर्को छोराले त राम्रो गरेको छ नि भन्ने सोच आउन थाल्यो ।